Ahoana no Andaminan’ny Vavolombelon’i Jehovah ny Asa Fitoriana Ataony?
Hoy i Jesosy talohan’ny nahafatesany: “Hotorina maneran-tany ity vaovao tsaran’ilay fanjakana ity, ho vavolombelona amin’ny firenena rehetra, vao ho tonga ny farany.” (Matio 24:14) Ahoana anefa no hahavitana an’izany fitoriana eran-tany izany? Ho vita izany raha arahina ny modely navelan’i Jesosy.—Lioka 8:1.
Miezaka mankany an-tranon’ny olona izahay. Nampiofanina hitory ny vaovao tsara isan-trano ny Kristianina voalohany. (Matio 10:11-13; Asan’ny Apostoly 5:42; 20:20) Natoro azy ireo hoe aiza avy no hitoriana. (Matio 10:5, 6; 2 Korintianina 10:13) Voalamina tsara koa ny fitoriana ataonay ankehitriny. Efa voazarazara hoe aiza avy ny fiangonana tsirairay no mitory. Vitanay tsara amin’izay ny manaraka an’ilay didin’i Jesosy “hitory amin’ny olona.”—Asan’ny Apostoly 10:42.
Mitory any amin’izay toerana misy olona izahay. Izany mihitsy no nataon’i Jesosy. Teny amoron-dranomasina na teny am-pantsakana, ohatra, izy no nitory. (Marka 4:1; Jaona 4:5-15) Manahaka azy izahay ka miresaka amin’ny olona momba ny Baiboly, na aiza izany na aiza. Ohatra hoe eny an-dalana na eny an-tsena na eny amin’ny zaridainam-panjakana. Mitory amin’ny alalan’ny telefaonina koa izahay. Mitory amin’ny mpiray tanàna, mpiara-miasa, mpiara-mianatra, ary havana izahay isaky ny afaka manao izany. Olona an-tapitrisany àry no mandre ny ‘vaovao tsara momba ny famonjena.’—Salamo 96:2.
Iza no tianao hiresahana ny vaovao tsaran’ny Fanjakan’Andriamanitra? Lazao aminy fa hanao zavatra hahasoa azy io Fanjakana io. Resaho aminy izany raha vao afaka ianao.
Inona ilay “vaovao tsara” tsy maintsy torina?
Manahaka an’i Jesosy ny Vavolombelon’i Jehovah rehefa mitory. Inona no ataon’izy ireo?
Anontanio ny mpampianatra Baiboly anao hoe inona no azonao atao mba hiresahana ny zavatra nianaranao amin’ny olom-pantatrao sy hahaizanao mandanjalanja rehefa manao izany.
Hizara Hizara Ahoana no Andaminana ny Asa Fitoriana Ataonay?
jl lesona 12